DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA SAMSUNG ML 1641 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Download ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka onye nbipute ahụ Samsung ML 1641
Ụlọ ọrụ mgbasa ozi nwere ike iwepụ SanDisk - otu n'ime ụdị nkà na ụzụ kachasị dị mfe na akụkọ ihe mere eme nke ụdị ngwaọrụ. Nke bụ eziokwu bụ na onye nrụpụta emebeghị ka otu mmemme nwere ike inye aka weghachi ụgbọala ahụ. Ya mere, ndị nwere ihe mgbaàmà yiri nke ahụ, ọ na-anọgide na-agagharị site na forums ma na-achọ posts nke ndị ọrụ ndị ọzọ nwere ike idozi ihe ọdịda SanDisk ngwaọrụ.
Anyị gbalịrị ịnakọta ihe omume ndị ahụ niile na-arụ ọrụ na ndị na-ebu ụlọ ọrụ a. Ha gbanwere nnọọ ntakịrị.
Esi weghachite ngwa ngwa USB SanDisk
Ihe ngwọta ahụ wee bụrụ ihe dị ịtụnanya ma dị iche iche. Ya mere, otu n'ime ha ka a na-aha maka ụlọ ọrụ ọzọ, ma n'ihi ụfọdụ ihe ọ na-arụ na SanDisk. A na-akwụ ụgwọ ọzọ, ma ị nwere ike ịnwale ya n'efu.
Usoro 1: SanDisk RescuePRO
Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara n'aha ahụ, o yiri ka ndị nnọchiteanya SanDisk anaghị ama ihe ọ bụla banyere ya. Ị nwere ike ibudata ya na saịtị nke ụlọ ọrụ LC Technology International. N'ọnọdụ ọ bụla, usoro a na-egbochi mweghachi nke mgbasa ozi ndị nwere ike iwepụ, ọ bụkwa anyị ka nke a bụ ihe kachasị mkpa. Iji jiri RescuePRO, mee ihe ndị a:
Nweta nkwado site na saịtị nke LC Technology International (nke a njikọ maka ndị ọrụ Windows, ọ bụrụ na ị na-eji Mac os, budata ihe omume ahụ ebe a). Ebe nrụọrụ ahụ nwere nsụgharị atọ - Standard, Deluxe and Deluxe Commercial. Mbụ ị nwere ike ịnwale iji Ọkachamma. Iji mee nke a, pịa "Gbalịa nweta Nyocha FREE"iji budata mbipụta ngosi.
A ga-ebute gị gaa na ibe ebe ịchọrọ ịkọ data nkeonwe. Jupụta na mpaghara niile - a ga-akọwa ihe ọmụma dịka ịchọrọ, naanị e-mail ga-adị adị. N'ikpeazụ, pịa "Nyefee"iji gosi nkwenye gị ịnweta ngosi SanDisk RescuePRO.
Ọzọ njikọ ga-abịa ozi. Pịa na "RescuePRO® Ọkachamma"ibudata usoro ihe omume ahụ.
A ga-ebudata ebe nchekwa ahụ na faịlụ nwụnye. Gbaa ya ma wụnye usoro ihe omume ahụ. Enwere foto na vidiyo / mkpọchi mgbake. Na ikpe site na nyochaa, ọrụ ndị a anaghị arụ ọrụ, ya mere ọ naghị eme ka ha nwee ike ịgba ọsọ. Naanị ihe i nwere ike iji mee ihe bụ formatting. Maka nke a, enwere bọtịnụ "Hichapụ mgbasa ozi"(ọ bụrụ na ị rụpụtara RescuePRO na Bekee). Pịa ya, họrọ mgbasa ozi gị ma soro ntuziaka.
Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị na n'ọnọdụ ụfọdụ, bọtịnụ nhazi ahụ yiri ihe na-apụghị ịba uru (ọ ga-abụ isi awọ ma ọ gaghị ekwe omume pịa ya). O di nwute, ọ bụghị ihe doro anya na ihe kpatara nkewa ahụ n'ime ndị ọrụ ahụ nwere ọrụ a na ndị na-adịghị.
Ọ bụrụ na ị jikwaa iji SanDisk RescuePRO, a ga-ehichapụ data niile site na windo mbanye. A ga-edozi ya ozugbo na njikere ịrụ ọrụ n'ọdịnihu.
Nzọụkwụ 2: Nkọwapụta Ahịa Ahịa
Nke a bụ usoro ihe omume ahụ maka ụfọdụ ihe kpatara ya na ụfọdụ ndị na-ebu SanDisk. Nkọwa ya na-ekwu na ọ na-arụ ọrụ na ngwaọrụ ndị nwere ndị na-achịkwa PS2251-03. Mana ọ bụghị ihe niile SanDisk flash na-arụ ọrụ na Ọkpụkpọ Ahịa Sịkọnụ nwere ike ịrụ ọrụ dị otú ahụ. N'ozuzu, ọ bara ezigbo uru. Iji mee nke a, ị ghaghị ime ihe ole na ole dị mfe:
Nbudata usoro ihe omume a, kpochie ebe nchekwa.
Fanye USB flash drive na-agba ọsọ ihe omume ahụ.
Ọ bụrụ na ihe ọ bụla emee ma ọ̄ bụ ụdị njehie dị, ọ pụtara na ngwaọrụ gị adabaghị maka ọrụ a. Ma ọ bụrụ na ọ amalite, dị nnọọ pịa "Nhazi"ma chere ruo mgbe ngwụsị nke nhazi usoro.
Usoro 3: Nchekwa USB Disk Nchekwa Ngwá Ọrụ
Otu n'ime ihe omume ole na ole na-arụ ọrụ nke ọma na mgbasa ozi SanDisk. Ọ bụ naanị otu n'ime listi anyị nwere ike ịlele mgbasa ozi na-ewepu, gbanwee njehie na ya ma kọwaa ya. Iji nchekwa USB Disk Ngwaọrụ yiri nke a:
Download ma wụnye usoro ihe omume ahụ na kọmputa gị.
Dee ụgbọ mmiri gị na "Ngwaọrụ".
Lelee igbe "Dezie njehie"(hichaa njehie),"Ngwudata nyocha"(scan disk) na"Lelee ma ọ bụ ruru unyi"(chọpụta ma ọ bụrụ na mgbasa ozi mebiri emebi) Pịa"Lelee diski"ịlele flash mbanye ma dozie njehie na ya.
Gbalịa jiri usoro nchekwa gị ọzọ. Ọ bụrụ na ọ dịghị ihe gbanwere, pịa "Hazie disk"ịmalite ịkpụgharị ụgbọala.
Chere ruo ọgwụgwụ nke usoro.
Ihe omumu: Otu esi eji nchekwa USB Disk Storage Tool
Ihe ọzọ ị nwere ike ime
Na mgbakwunye na ihe omume niile dị n'elu, na ụfọdụ na-enyere SMI MPTool aka. Ejiri ngwá ọrụ a na-arụ ọrụ na draịvụ ike ọkụ ọkụ. Esi jiri ya mee ihe, akọwapụtara ya n'ụzọ zuru ezu n'isiokwu banyere nrụzi nke ụdị ngwaọrụ (usoro 4).
Ihe omumu: Ikepị ọkụ mbanye Silicon Ike
N'ọtụtụ saịtị, ha na-ede na e nwere ihe bara uru ịba uru na-agụ / Dee / Dee Akpa Nyocha. Mana ọ bụghị otu nghọta nwere ike ibudata ụdị dị ka achọtaghị.
N'ọnọdụ ọ bụla, ị nwere ike iji otu n'ime mmemme ahụ iji weghachite faịlụ ndị ehichapụrụ, wee sụgharịa mgbasa ozi nwere ike iwepụ. Ị nwere ike ime nke a n'otu n'ime ụzọ ndị a kọwara n'elu ma ọ bụ jiri ngwá ọrụ Windows ọhụụ. Banyere nke ikpeazụ, a na-akọwa usoro nke iji ọkpụkpọ diski na-akọwapụta ihe n'isiokwu na Silicon Power flash draịva (na njedebe). Ị nwekwara ike ịchọrọ ndepụta nke faịlụ kachasị mma nwelite ngwanrọ.